Isbedel la filayo in lagu sameeyo hay’adaha amniga ee Dowladda Somalia – XAMAR POST
Isbedel la filayo in lagu sameeyo hay’adaha amniga ee Dowladda Somalia
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wada qorsho ku aadan sidii isbedel muuqda ay ugu sameyn laheyd Hay’adaha amniga, kadib markii ay Magalada Muqdisho kusoo kordheen weerarada iyo dilalka qorsheysan.
Warar ay heshay Idaacadda Risaala ee Magalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in isbedel la qorsheynaayo uu saameeyo Wasiirka Amniga iyo Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya oo labaduba la filayo in xilalka laga wada qaado.
Sidoo kale isbedelka la filayo in lagu sameeyo Hay’daha Amniga ayaa waxaa ka mid noqon doona Magacaabista Taliyaha Hay’adda Nabadsugida Soomaaliya oo uu hadda si KMG ah uu u hayo Taliye ku xigeenka NISA Fahad Yaasiin oo isaga qudhiisa safaro dibada ah dalka uga maqnaa.
Wajiyo Cusub ayaa la qorsheynayaa inay kasoo muuqdaan isbedelka lagu sameynayo Hay’adaha amniga, waxaana la baadi goobayaa xeel dheerayaal amniga wax ka yaqaana,waxaana tani ay daba socotaa kadib markii habeen ka hor uu Madaxweyne Farmaajo uu kulan canaan ah uu la qaatay taliyeyaasha Ciidamada iyo Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir.
Madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay saraakiisha Ciidamada iyo guddoomiyeyasha degmooyinka in labadii Sano ee la soo dhaafay ay dowladda Federaalka qaadaneysay fashil dhinaca amniga ah,isla markaana xilligaan wixii ka dambeeya aan loo dul qaadan doonin falal amnidarro ee ka dhaca Magalada muqdisho.
Tallaabadan isbedelka loogu sameynayo Hay’adaha amniga ayaa kusoo aadaya xilli todobaadyadii la soo dhaafay Magalada Muuqdisho ay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo dad badan ay ku dhaceen, iyada oo Magaalada Muqdisho uu ka jiray culeys dhinaca amniga.